Olympiakos oo eriday tababare ka caawiyay kaalinta koobaad - BBC News Somali
Olympiakos oo eriday tababare ka caawiyay kaalinta koobaad
Image caption Paulo Bento ayaa Boortaqiiska tababare u ahaa 2014 markii ay ka qaybgaleen Koobk Adduunka
Tani ma shaqo ka eryidii ugu xumayd ee xilli ciyaareedkan baa?
Kooxda ka dhisan dalka Giriigga ee Olympiakos ayaa eriday tababaraheedii Paulo Bento oo horayna u soo layliyay xulka qaranka ee Boortaqiiska, inkastoo uu ka caawiyay in ay todobo dhibcood ku hogaamiyaan horyaalka dalkaasi ee Superleague.
Bento ayaa shaqada laga eryay ka dib todobo billood oo uu xilkaas hayay, arrintan ayaa timid ka dib markii ciyaartii saddexaad laga badiyay Axaddii, taas oo albaabka u furtay kooxda Panionios oo kaalinta labaad ku jirta hal ciyaar oo horay uga baaqatayna dheeli doonta.
Tababarahan 47 jirka ah ayaa ahaa kii labaad ee kooxda Olympiakos soo mara xilli ciyaareedkan.
Bento ayaa afar jeer laga badiyay intii uu naadigan joogay iyadoo ay 23 kulan dheeshay kooxdu.
Olympiakos ayaa rajaynaysa in ay horyaalka sanadkan hanato, iyaga ayaana koobkan soo qaadayay tan iyo sanadkii 2000 marka laga reebo labo xilli ciyaareed oo keli ah.
Bento ayaa xilka baneeyay iyadoo ay kooxdu ugaarsanayso saddex koob, wareega 16ka ee Europa League ayay isku arki doonaan kooxda Besiktas ee dalka Turkiga ka dhisan, sidoo kalena waxay ka mid yihiin afarta kooxood ee isugu soo hartay koobka Greek Cup.
Sawirro laga qaaday soo galooti oo abaal marin lagu helay
4 Sebtembar 2016